Diraama Dheebuu - Kutaa Haaraa
Diraama Dheebuu televishiina Oromiyaa kan isiniif darbuu dha. Diraama Dheebuu guyaa sanbataa sa’ati 8:00WB kan isiniif tamsaa’u yoo ta’u, warri carraa televishiina irratti argachuu hin dandeenye fuula marsariiti keenya, Xalayaa.com irratti argachuu dandeettan.
Barreessaa Diraama Dheebuu: Qalbeessa Magarsaa
YouTube keenya hordofa!
Good Job Naa’ol
Hojii gaariidha. Jabaadhaa!
diraamaan dheebu sadarkaa biyyoolessaatti beekamtii guddaa qaba, seenaa dhugaa uummata oromoo keessa jiru ifa baasee ibsa, haala kanaan tora mediatti bahee namoota biyya keessaaf alaaf dhiiyaatee aadaaf dhuudhaa uummata keenyaa kannutti argisiisaa jirudha, anaaf diraamaan kun diraamaa Eelaa waliin tokko, jabaadhaa jajjabee artistoota dacheen oromiyaa biqilchite, nu uummatni oromoo guddina artii keenyaaf wal bukkee dhaabanne haa jajjabeessinuun dhaamsa kooti
[…] ture. Achiimmoo diraamaalee baacoo akka qaanqee fi diraamaa dhiyeenya agarsiisamaa ture Diraama Dheebuu jedhu keessattis qooda guddaa fudhachuudhaan daawwattoota biratti nama jaal’atama guddaa qabu […]
Jabaadhu Aadaa Sabaa Mul’isi.
ani diraama dheebuu kutaa 1ffaa irraa hangaa kutaa 54ti daawonloodi godheen ilaalle kutaa kana hundaayyu of harkaa qaba diraama baayee midhaaga ,barsiisa kan sammuu nama jeequ kan yadoo namati baayisu nama ammanun akka gaari hin tanee fi waan baaye of keessa qaba kutaa 55ffaa nuf lakkiisa maloo
BAYYE GARII DHA
Baay’ee namatti tola itti cimaa
Diraamaa an baay’ee jaalladhuu fi itti gammadu, diraamaa diraamaa dheebuuf iddoo guddaan qaba. Taatonni diraamichaa, FUNYEE irraa eegalee hundumtuu kabaja guddaa na biraa qabu.
QALBEESSAAN immoo addumatti jiraadhu. kan fuulduraas waa guddaa sirraa eegnaa jabaadhu.
Diraama Dheebuu Rarra'e Hafee Jira
[…] Diraama Dheebuu […]
diraamnii dheebbuun baay’ee bareeda ,garuu maaf raar’ee hafee?